Miara-miasa amin’i Kristy hamonjy ny very
"...Ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia namory ny sakaizany sy ny namany ka nanao aminy hoe : Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very."Lio. 15:6
Raha nanambara izany teny izany i Jesôsy dia maro tamin’ireo olona nihaino azy no nahafantatra ny atao hoe fiainan’ny mpiandry ondry tany Palestinina. Tany amin’io faritra io, ny andian’ondry dia tsy nohidina tao anaty vala fa nentina teny an-dohasaha izay nisy lavaka sy hantsana.
Nisy mandrakariva ny loza mitatao ny amin’ny mpangalatra sy ny amboadia ka nilaina ny fiambenana. Indraindray dia misy ondry mania miala amin’ny andian’ondry; koa nisaina matetika izy ireo mba hahitana andrao dia nisy very, satria tsy maintsy manao tatitra marina tsara momba ny ondry iandraiketany ny mpiandry ondry (...) Feno loza mitatao ny fiainan’ny mpiandry ondry. Tsy hitsilamodamoka sy haka aina fotsiny ny mpiandry ondry mahatoky fa hikatsaka ny ondry nania na dia eo anivon’ny oram-baratra sy ny tafiotra aza.
Toy izany no fihetsik’ilay Mpiandry tsara manoloana ny mpanota very. Katsahiny izy; tsy misalasala Izy manoloana ny loza sy ny toe-javatra mitaky fandavan- tena. Maniry izy ny hitaona ny fanahy itambesaram-pahotana ho amin’ny fibebahana, ny famonjena, ny fiadanana, ny fitsaharana ary ny fahasambarana ao amin’ny fitiavany. Ary tombontsoa ho an’izay rehetra nanandrana ny fitiavan’i Jesôsy tao am-pony ny mikatsaka olona izay azony hoentina eo amin’i Jesôsy amin’ny alalan’ny ezaka sy ny fahendrena ary ny halemem-panahy asehon’ny tenany manokana. (...) Afaka ny ho mpiara-miasa amin’i Jesôsy Kristy isika.-YI, 28 Aprily 1886.